Pakistan: Fihetseham-po tamin’ny saika nanapoahana ny Time Square · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2010 7:30 GMT
Tamin'ny voalohan'ny volana dia niteraka fanairana amin'ny loza tao New York ny fikasana hanapoaka baomba ny Time Square. Voasambotry ny polisy tao amin'ny seranam-piaramanidina i Faisal Shahzad, terantany pakistano-amerikana nahiahiana ho tompon'antoka tamin'io fikasana hanapoaka io. Araka ny tatitra dia hita teo afovoan'ny Time Square ny fiarakodian'i Faisal feno lasantsy, propane, afomanga ary zezika.
Ny fisamborana azy dia tohin'ny fisavana maro, fisamborana sy fanadihadiana hafa koa, niteraka tombatombana sy ady hevitra mikasika ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy Pakistan. Raha mbola miahiahy ny mety hisian'ny asa fampihorohoroana hafa ny tontolon'ny fanovan-gazety sy ny manam-pahefana amerikana, dia maro kosa ireo any Pakistan kosa no mihevi-tena ho voasoketa. Mitantara ny fiantraikan'ny politikam-panomezan'i Etazonia visa sy ny fifandraisan'i Etazonia sy Pakistan noho ilay fikasana hampihorohoro ilay mpitoraka bilaogy Ammar Yasir:
Ny loza ho an'ny pakistaney dia ny fanarahamaso antsika noho ny heloka tsy nataontsika. raha jerena ny antontan'isa dia maro ny olona hiharan'ny fampihorohorohana any Pakistan noho ny any Etazonia. Mahomby tsara lavitra noho ny miaramila amerikana sy ny OTAN mitambatra ny miaramilantsika any Afghanistan. Afaka mametraka ny tadiaviny amin'ny fanjakana Pakistaney i Etazonia fa tsy amin'ny mpifidy izay ho filoham-panjakana any Pakistan. Misidina eny amin'ny habakabaky Pakistan ny fiaramanidina lehibe amerikana, mandaroka baomba trano pakistane maro ary avy eo mipetraka am-pilaminana ao amin'ny toby pakistane. Mampiahiahy ny fahamatorantsika, mampanontany tena ny fitokisana antsika ary lasa miankina amin'izay havoakan'ny mpanao sarimihetsika avy any Hollywood ny ho avintsika.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny CHUP manome soson-kevitra hamahana olana:
Faisal Shahzad angamba pakistano-amerikana, kanefa tsy hoe Pakistaney ihany izy. Marina fa iraiketan-dazaratsy maro i Pakistan. Olana tsy misy fiafarany ny asa fampihorohorohana. Kanefa ny vahaolana tsara amin'izao fotoana izao dia ny hijeren'ny firenena roa tonta – Etazonia sy Pakistan – hitodika kokoa amin'ny fiarah-monina ary handray andraikitra hamahana ny olana misy.
Soratra ao amin'ny bilaogy mitondra ny lohanteny hoe “Iza moa i Faisal Shahzad?” navoakan'i Adil Najama ao amin'ny All Things Pakistan, nijery akaiky ny momba an'i Faisal ary mangataka ny handinihana ny zava-misy ankoatry ny hita maso:
Aza hidifiana ny fanontaniana sarotra tsy maintsy apetraka amintsika ihany. Kanefa aoka tsy ho masiaka mihoatra ny tokony ho izy amintsika ihany koa isika. Aoka isika hiasa amin'ny herintsika rehetra hahazo hoe ahoana moa ny anankiray amintsika no manao na hoe misaina hanao zavatra mahamenatra tahaka izany. Aoka tsy havelantsika ho ny endrika mampatahotra tahaka izany no hitarika antsika hatrany amin'ny fanamelohana ny mpiray firenena rehetra. Aoka hekentsika ny amin'ny maha-olomeloka azy ; aoka hekentsika ny antony nisamborana azy : nanao meloka ; kanefa aoka tsy avelantsika hifangaro amin'ny mahaizy antsika ny heloka nataony.
Niteraka tahotra teo amin'ny pakistane ny fisamborana an'i Shahzad sy ny tohiny rehetra, na ny any ivelany izany na ny ao Pakistan. Ny lahatsoratra miresaka ny fifandraisana mety hisy amin'ny vondrona pakistane efa tsy mandresy lahatra intsony. Tsy averina ambara eto indray fa niteraka savorovor iny zava-nitranga iny, ary namerina an'i Pakistan ho eo amin'ny toerana aloha amin'ny sehatra indray. Angamba, araka ny nasosoky Lakhani, fotoana tokony hiarahan'ny firenena roa tonta mipetraka manodidina latabatra iray izao hitadiavana vahaolana maharitra ary hametrahana paikady hanoherana ny asa fampihorohorohana.